Kulan gaar ah oo maanta lagu wado in uu dhex maro madaxweyne Deni iyo r/wasaare Rooble – Calanka.com
Kulan gaar ah oo maanta lagu wado in uu dhex maro madaxweyne Deni iyo r/wasaare Rooble
in Gudaha / HEADLINE — by admin —	December 12, 2020
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Garowe ayaa waxaa la filayaa manata in uu kulan la yeesho Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Ra’iisul wasaaraha ayaa isku dayaya inuu xal u helo khilaafka ka taagan habka loo fulinayo doorashada dadban ee ay madaxda dalku ku heshiiyeen.
Illaa hadda ma ay jirto wax kulan ah oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee cakiran ay ka yeesheen ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland.
Hasayeeshee qorshuhu waxa uu yahay in maanta kulan ay albaabada u xiran yihiin ay dhinacyadu yeeshaan.
Ra’iisul wasaare Rooble, ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo ururrada bulshada rayidka ee Puntland, si uu wax uga waydiiyo doorashada dadban ee uu dalku galayo.
Ra’iisul wasaaraha ayaa la filayaa in maalmo uu ku qaadan doono magaalada Garowe, iyadoo aanan la saadaalin karin halka ay arrini ku biyo-shuban doonto.
Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaanan weli soo gudbin xubnihii doorashada ee heer federaal iyo heer mamaul gobaleed, arrintaas oo dib u dhigtay hannaankii doorashooyinka baarlamaaniga ee horraantii bishan bilaaban lahaa.
Shirka Iskaashiga Soomaaliya ee todobaadkii hore lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid aheyd arrimaha la xiriira doorashada iyo ammaanka, kulankaas oo ah ka soo qeybgaleen wufuud kala duwan oo ay ka mid ahaayeen safiiro iyo wakiillo metelayay dalal, hay’ado caalami ah iyo hay’adaha kala gaddisan ee dowladda Soomaaliya.
Intii uu kulankaas socday ayaa waxaa aad carabka loogu adkeeyay in khilaafka cusub ee la xiriira doorashada uu sababi karo dib u dhac ku yimaadda hannaanka doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, oo shir gudoominayay kullankaasi ayaa waqtigaas sheegay in xukuummaddiisa ay ka go’an tahay “in si buuxda ay ugu hoggaansanto heshiisyadii la gaaray ee waafaqsan dastuurka iyo hannaanka hadda ee doorashada.”
“Waan soo dhoweynayaa talooyiinka wax dhisaya. Madaxweynaha wuxuu soo saari doonaa casuumaadda madaxda maamul goboleedyada isla marka aan soo dhammeeyo booqashadeyda maamullada.”
“Walaaladey daneynaya mustaqbalka madaxweynimada, iyagana waxaan leeyahay albaabkeyga wuu idiin furan yahay. Cabashada aad qabtiinna diyaar ayaan u ahay in aan xalliyo,” ayuu yiri.
“Laakiin mid xisaabta halagu daro, sharciga lagama wayno, dastuurka lagama wayno, wixii maamul goboleedyada iyo Dowladda Federaalka ay ku heshiiyeenna waa in la tixgeliyo, waana in la raacaa,” ayu hadalkiisa ku sii xoojiyay Ra’iisul Wasaare Rooble.